Ukuhlanganiswa kwe-Ultrasonic koMkhakha Wezimonyo - Hielscher Ultrasound Technology
Amadivaysi e-Hielscher ultrasonic asetshenziselwa imboni yezimonyo ngezinqubo eziningi, isib. Ukukhiqizwa kwama-lotions, i-sunscreen, ama-creams noma ama-ointments.
Ukwakhiwa kwemikhiqizo yezimonyo ezintsha kuhilela izinselele eziningi zokucubungula, njenge- Ukuhlakazeka kwamaseli nokuqina, noma ukuhlakazeka nokuqothula ama-powders abe ngamanzi. Ngezinqubo ezinjalo, kanye ne ukukhiqizwa kwe-emulsions ezinzile, i-degassing, I-homogenizing kanye ne ukulungiselela i-liposome I-Hielscher inikeza imishini yokuxuba i-ultrasonic ukuze isetshenziswe kokubili, ucwaningo lwama-laboratory kanye nokukhiqizwa kwezimboni.
Ukucwaninga nokuhlaziya izimonyo
Hielscher Amadivayisi we-Ultrasonic Laboratory zilungele ukucwaninga nokuthuthukiswa kanye nezinqubo zemihlahlandlela. Amadivaysi afana ne-UP100H ephathekayo afanele izicelo eziningi, isib. Ukuxuba, Ukuhlakazeka, Emulsifying, I-homogenizing, ukuhlukana noma ukuchithwa. Amadivayisi we-laboratory kulula ukuyisebenzisa, futhi abe nokusebenza okungalingani nokuguquguquka. Amadivayisi we-laboratory e-Ultrasonic asetshenziselwa amandla avela ku-1mL kuya ku-2 amalitha. Amadivayisi we-Hielscher ultrasonic anikezela ukulawula okunembile kwenqubo kanye nokuphindaphinda okuhle kakhulu kwezinga kuze kufike esikalini sokukhiqiza. Ukulawula okuzenzakalelayo kwamaplitude nokuvama kunesisindo ekuqinisweni kwenqubo nokuphindaphinda. Yingakho, lesi sici sihlanganisiwe kuwo wonke amadivayisi we-Hielscher ultrasonic.
I-Ultrasonic Mixer ku-cosmetics Laboratory
Ultrasonication kungaba senziwe kalula. Ukuhlolwa kwelabhuthi kuzovumela ukukhetha usayizi wezinto ezidingekayo ngokunembile. Ithebula elingezansi libonisa izincomo zedivayisi jikelele ngokuya ngevolumu ye-batch noma izinga lokugeleza okufanele licutshungulwe.
Ama-reactors ama-Hielscher ultrasonic avame ukusetshenziswa ku-inthanethi. Lezi zinto zifakwe emkhunjini we-reactor. Kukhona lapho kuvezwa khona i-cavitation ye-ultrasonic ngokuqinile. Isikhathi sokuchasisa siwumphumela wevolumu yomthamo kanye nesilinganiso sokudla okubonakalayo. Inication sonication iqeda ukudlula ngoba zonke izinhlayiya zidlula ikamelo le-reactor ngokulandela indlela echaziwe. Njengoba zonke izinhlayiya zivezwa kwimingcele ye-sonication efanayo ngesikhathi esifanayo phakathi nomjikelezo ngamunye, i-ultrasonication iyashintsha ijika lokusabalalisa kunokuba likhulise. Ngokuvamile, “ukukhishwa kwesokudla” ayikwazi ukubonwa kuma-sampuli asondisiwe.
Ukuze uthole amafomu okushisa okushisa, i-Hielscher inikeza ama-reaction reactors e-jacketed kuwo wonke ama-laboratory namadivayisi ezimboni. Ngokupholisa izindonga zangaphakathi zemijondolo, ukushisa kwenqubo kungasakaza ngokuphumelelayo.
I-Hielscher i-reactor yokuxuba i-ultrasonic iqukethe umkhumbi we-reactor kanye ne-ultrasonic i-sonotrode. Le yodwa ingxenye, okumele igugu futhi ingashintshwa kalula ngaphakathi kwamaminithi. Amaplangipi okugcoba-oscillation avumela ukufaka i-sonotrode zibe izitshalo ezivulekile noma ezivaliwe ezicindezelayo noma amaseli okugeleza kunoma yikuphi ukuma. Awekho okudingekayo okudingekayo. Ama-reactor cell asegeleza ngokuvamile akhiwe ngensimbi engagqwali futhi abe nama geometri alula futhi angakwazi kalula kalula futhi usuliwe. Awekho ama-orifice amancane noma amacembe abufihliwe. Izigameko ezikhethekile ze-flow cell (cell-reactors) zihlangana ne-CIP ethuthukile (ihlanzekile-indawo) kanye nezidingo ze-SIP (inzalo-in-place) nazo ziyatholakala.
Cela ulwazi mayelana nokucubungula izimonyo!
Uyacelwa ukuthi usebenzise ifomu elingezansi, uma ufisa ukucela imininingwane eyengeziwe mayelana nokuhlanganiswa kwezimonyo usebenzisa i-ultrasonication. Sizojabula ukukunikeza uhlelo lwe-ultrasonic oluhlangabezana nezidingo zakho.